Hikarigaoka Station, Tokyo (15th Jan)
English • Jan 18, 2022
We TTAJ undertook our weekly pamphlets and tissues sharing activity on this week Saturday (2022/1/15) at Hikarigaoka Station.
TTAJ did not do Fund Raising but we had to accept the donation from generous Japanese Donors. The total of 41,000 Yen Fund has been transferred to the places where the medical aids are needed.
We were able to hand out approximately 200 pocket tissues and pamphlets from 11:30am-14:30pm.
"ဘယ်အထိတိုက်မလဲ အဆုံးထိတိုက်မယ် နိုင်အောင်တိုက်မယ်"
ယမန်နေ့ ၁ လပိုင်း ၁၅ ရက်နေ့မှာ TTAJ အဖွဲ့အနေနှင့် Pamphlets / Pocket Tissue ဝေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို Tokyo / Hikarigaoka ဘူတာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
TTAJ အဖွဲ့အနေဖြင့် အလှူငွေ ကောက်ခံခြင်းမရှိသော်လည်း စေတနာရှင် ဂျပန်လူမျိူးများမှ အလှူငွေ လာရောက်ထည့်ဝင်ကြတာမို့ လက်ခံယူခဲ့ပါတယ်။ လက်ခံရရှိသမျှ အလှူငွေ စုစုပေါင်း ၄၁,၀၀၀ ယန်းကို မြောင်ဒေသမှ ဆေးဝါးလိုအပ်နေသူများအတွက်အလှူငွေအဖြစ် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
လေတွေတိုက်ပြီး ရာသီဥတု အေးစက်နေတဲ့ကြားက တကူးတက လာရောက်ကူညီ အားဖြည့်ပေးခဲ့ကြသော Volunteers ညီအကို မောင်နှမများ ၊အပတ်စဉ်တိုင်း လာရောက်အားဖြည့်ပေးပါသော ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယို မှတ်တမ်း ရိုက်ကူးပေးပါသော Camera သမား များအားလုံးကို TTAJ မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ။
နေ့လည် ၁၁ နာရီ ခွဲ မှ ၂ နာရီ ခွဲ အတွင်းလက်ကမ်းစာစောင်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်၊ တစ်ရှူး အခုရေ ၂၀၀ ကျော်ကို ဂျပန်ပြည်သူ/သားတွေ လက်ဝယ်အရောက် ဝေငှပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။